Emthunzini kaCeibal (One Laptop per Uruguay Per Child) | Kusuka kuLinux
Isikwele esincane sezulu,
Umfula owenziwe ngokukhanya
Ngifuna ukuba itilosi
ngaphandle kokushiya amanzi ami angemuva
Ngiyakuqonda ukuthi uJorge Drexler uyenyanyeka njengezingoma zakhe, kepha okuthunyelwe bekufanele kuqale ngokuthile.
I-Ceibal Plan ngumklamo owaqalwa ngonyaka we-2007 njengokuqaliswa kwephrojekthi I-Laptop eyodwa Ingane ngayinye nguNicholas Negroponte lapho abafundi bezikole (abavela emazweni angathuthuki) bekwazi ukufinyelela kwi-laptop eshibhile. Iphrojekthi ithole zonke izinhlobo zokudunyiswa nokugxekwa kepha isasebenza. Namuhla kunezigidi ezingama-XO (ezaziwa nangokuthi amaCeibalitas) ezikoleni nasezikoleni eziphakeme e-Uruguay.
Ama-XO ngama-laptops enzelwe ukuba amancane, ashibhile, aqine, futhi asebenze kahle. Kusanda kumenyezelwa ukuthengwa kweX0 1.75 entsha, ene-4 to 8 gigabyte flash hard drive, 1 to 2 gigabyte ram memory, 400 to 1000 Mhz ARM processor nebhethri elihlala isikhathi eside phakathi kwamahora ama-5 kuya kwayi-10, kanye nokusetshenziswa kwamandla kungu-2 W (uma kuqhathaniswa no-10 kuye ku-45 W odliwe ngama-laptops ajwayelekile, kuningi kakhulu) …… .kanye izilinganiso zawo azidluli amasentimitha angama-30.
Ngokuphathelene nesoftware, inguqulo eyenziwe ngezifiso ye- Fedora, kanye nendawo enoshukela (yize kwezinye izimo bathuthela kwamanye ama-distros afana Ubuntu). Kube nempikiswano eqinile lapho kuphakama ithuba lokwenza ama-XOs ngeWindows XP. Akudingeki ukuthi kushiwo, uNicholas Negroponte wagcwala ukuthukwa waze wazama nokukhomba ukuthi umfowabo uyindlalifa yeCIA. Iqiniso ... ………………………………………………………………………………………………………………… xa kufakwe neLinux, iningi labasebenzisi livila kakhulu ukushintshela kolunye uhlelo lokusebenza. QHUBEKA, ANGIKE NGIBONE UMUNTU ESEBENZA I-XP E-CEIBALITA.
Kukhona labo ababefuna ukwazi ukuthi bayifaka kanjani i-XP kumishini ye-Linux (ngoba bebefuna ukuzisebenzisela ukudlala noma ngoba bengayithandi indawo enoshukela, okuyindlela enjalo imbi kabi ngokunambitheka kwami) futhi abakuzuzile bekuwukushintsha imvelo yokuqhafaza kuphela futhi bafunde ukusebenzisa iwayini (ngemidlalo, ngiyagcizelela).
Ngokuqondene nokugxekwa (ngaphezu kwesoftware), kusuka kokuqondakalayo nokwakudala njengokuntuleka kwabasebenzi bezobuchwepheshe, ulwazi oluncane lothisha abalusebenzisayo, i-ceibalitas ephukile, njll. Ngisho abahlukanisi bathanda i- «izikole ziyawa futhi ucabanga ngokunikeza izingane amakhompyutha»Noma ezingenangqondo njenge«basengozini yokushabalala othisha«. Namuhla kuphela okwedlule okukhona.
Nazi izixhumanisi ezimbalwa, uma kwenzeka ufuna ukuba nentshisekelo ku-Plan Ceibal:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Emthunzini weCeibal (One Laptop per Child yase-Uruguay)
Yebo, ngokumangazayo, enye yalezi inenqama eningi kunekhompyutha yami yamanje
Lapha e-Uruguay ngibona izingane eziningi zine-laptop yazo, kuhle ukubona ukuthi ukusekelwa kwezingane nangaphezulu uma zikusebenzisa namuhla, uma umuntu efuna ukudlala, angadlala imidlalo esipheqululini esinikezelwe ezinganeni, ongayidingi nhlobo amawindi, Kubukeka sengathi kuyiphrojekthi enhle futhi kunenzuzo ukuthi izingane zine-inthanethi yamahhala esikoleni.
Sawubona umlingani wase-Uruguay uDiazepan.
Kuyiqiniso ukuthi i-Uruguay ibe yiphayona eMelika maqondana nalolu hlelo, kepha kunamanye amazwe emhlabeni ajoyine i-One Laptop Per Child (OLPC)
Ngivumelana nawe, indawo enoshukela imbi kakhulu futhi kuthatha isikhashana ukuqonda ukuthi isebenza kanjani ngoba yephula ngamafasitela esiwajwayele. Bengizokhetha ukusatshalaliswa okususelwa ku-apt / dpkg ... ngemvelo ye-e17 ngokwesibonelo, elula kakhulu kepha ekhangayo futhi "ejwayelekile".
Qaphela ukuthi lezo ezinikezwa izikole eziphakeme azinasizotha kangako. Ngobuhle basangulukile, futhi bane-dual-core athomu processor, i-Intel igp ekwazi ukusebenzisa i-GTA Vice City kahle (yebo, ngiyibonile kukhompyutha ephathekayo yomshana wami owenza ubuwula bokukhipha Ubuntu obuqhamuka efektri futhi faka i-MS Windows XP), i-2Gb ye-RAM ne-160GB HDD. Kumele kuqashelwe ukuthi womabili ama-laptops esikole (i-XO) nama-laptops ezikole eziphakeme (i-Intel Magallaes) ahanjiswa mahhala kubafundi bezemfundo yomphakathi. Lokhu kuyisenzo sokulingana nentando yeningi yamakhompiyutha engakaze ibonwe e-Uruguay (eyenziwa uhulumeni wephiko lesobunxele, ngokwemvelo), yize kukhona okunye ukuphikisana nalolu hlelo okuvumelekile.
Ngeqiniso angiqondi ukuthi ungabavumela kanjani abafundi ukuthi bafake uhlelo lokusebenza abalifunayo. Ngaphandle kwesikhulumi esivamile, othisha bangabanika kanjani abafundi izinkomba zokuthi benzeni nokuthi bangafika kanjani lapho?
Okubi kakhulu othisha abafuna ukusebenzisa iWindows kuma-ceibalitas. Endabeni yabafundi, kungenxa yokuthi abayithandi imvelo noma ngoba befuna ukudlala. Kepha ukuthi uthisha ufuna ukushintshela ku-XP kubi kakhulu ngoba lokho sekuvele kusaba ushintsho.
Ngine-netbok Eeepc 700 (enye yokuqala) futhi i-econ xp ayisebenziseki ngoba ihamba kancane, ngakolunye uhlangothi nge-linux iyamangalisa.
victor lescano kusho
Ngingubaba wengane esencane esemnyakeni wesithathu esikoleni esiphakeme futhi engakaze ibe ne-ceibalita ngingaba kanjani ukuze ibe nayo
Phendula ku-victor lescano
Mhlawumbe lapho? http://www.ceibal.edu.uy/Articulos/Paginas/sistema-de-compras-para-laptops.aspx
richard @ 40 kusho
Sawubona, ngivela e-Uruguay futhi ngisebenzisa i-Linux ekhaya, leli cala le-Ubuntu, iningi lothisha abazi ukuthi yini i-Linux nokuthi iyini imihlomulo yayo.
Izingane zesikole sikahulumeni zinikwe ama-laptops,
futhi othisha banikezwa izifundo zamakilasi ambalwa.
kepha abachazanga ukuthi isho ukuthini isoftware yamahhala.
noma yenzelwe ini. futhi nalabo bohlelo lwe-ceíbal babatshela othisha
ukuthi ngokulanda uhlelo kusuka ku-inthanethi ungaxhuma kwi-inthanethi.
abavela esikoleni esifanayo kodwa ngeZincwajana zabo abazisebenzisayo.
IWindows .lowo nalowo ukhululekile ukusebenzisa noma yini ayifunayo ngaphandle kwami.
Uma sifuna izingane zethu zifunde iLinux, kufanele sihole ngesibonelo.
kungumbono wami othobekile PS ngiyaxolisa ngamaphutha esipelingi
Phendula u-richard @ 40
Ukulungiswa kabusha kwepardus, izinguquko, kuthuthukisa: D (imininingwane lapha)